Dowladda Itoobiya oo shaacisay in ay mas’uuliyiin ka dishay Tigray | Aftahan News
Dowladda Itoobiya oo shaacisay in ay mas’uuliyiin ka dishay Tigray
Addis Ababa (Aftahannews) — Ciidamada milatariga dowladda Itoobiya ayaa howlgal ay fuliyeen ku dilay mas’uuliyiin sar sare oo ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa xoreynta Tigray ee magaciisa loo soo gaabiyo TPLF.
Bayaan uu soo saaray mas’uulka ugu sarreeya waaxda ciidan diridda Itoobiya, Janaraal Tesfaye Aylew, ayuu ku sheegay in sagaal sarkaal oo kale oo ka tirsanaa TPLF la xidhay.
Hase yeeshee, ilaa hadda ma jiraan warar madax bannaan oo xaqiijinaya dilalka iyo xadhigga ay dowladda Itoobiya sheegatay.
Mas’uuliyiinta dowladda uu hoggaamiyo Ra’iisal Wasaare Abiy Axmed ayaa bishii November soo saaray amar lagu soo xidhayo in ka badan 60 qof oo ka mid ah saraakiisha sar sare ee TPLF.
Waxaana ilaa hadda meelna lagu sheegin qaar badan oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha TPLF – oo uu ku jiro guddoomiyahooda, Debrestion Gebremichael.
Ra’iisaal Wasaare Abiy Axmed ayaa bishii November ku dhawaaqay in lasoo afjaray howlgalkii milatari ee ka socday gobolka Tigray kaddib markii ay ciidamada federaalka gacanta ku dhigeen caasimadda gobolkaas ee Maqalle.
Kumannaan ruux oo ka barakacay dagaalka ka socday gobolka Waqooyiga Itoobiya ku yaalla ayaa gaadhay dalka dariska la ah ee Suudaan.